ကိုဗဈကာကှယျဆေးရရငျ အရငျဆုံး မထိုးဘူးလို့ ပွောလာတဲ့ ဖိုးခဈြ.. - Shwe Khit
ကိုဗဈကာကှယျဆေးရရငျ အရငျဆုံး မထိုးဘူးလို့ ပွောလာတဲ့ ဖိုးခဈြ
ပရိတျသတျကွီးတို့ရေ..တဈကမ်ဘာလုံးရဲ့ လညျပတျမှုယန်တရားတှေ ရပျတနျ့သှားစခေဲ့တဲ့အထိ သကျရောကျမှုအားပွငျးခဲ့တဲ့ ကိုဗဈကပျရောဂါဆိုးကွီးကို ကာကှယျကုသနိုငျဖို့ ပညာရှငျတှအေားလုံးနညျးမြိုးစုံနဲ့ စမျးသပျလာခဲ့တာ အခုဆိုရငျ သတငျးကောငျးတခြို့ ရှိလာပွီဖွဈပါတယျနျော။
ဆေးပညာဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျတဲ့ အငျအားကွီးနိုငျငံတခြို့ရဲ့ စမျးသျခကျြရလဒျကောငျးတှကွေောငျ့ လာမယျ့ ဒီဇငျဘာလလယျလောကျကစပွီး ကာကှယျဆေးစတငျအသုံးပွုနိုငျတော့မှာဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။ဒါ့ပမေယျ့ ကမ်ဘာလူဦးရအေကုနျလုံးအတှကျ တဈပွိုငျနကျတညျးထုတျလုပျနိုငျဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျသေးတာမို့ ကာကှယျဆေးရရှိလာခဲ့ရငျလညျး ဦးစားပေးအစီအစဉျတှနေဲ့ လိုအပျတဲ့အဆငျ့လိုကျ လုပျဆောငျသှားရမှာပါ။
လူ့အသကျကိုခွိမျးခွောကျနိုငျတဲ့ရောဂါမို့ လူတိုငျးကာကှယျဆေးပထမဆုံးရခငျြကွမှာ အမှနျဆိုပမေယျ့လညျး ဖိုးခဈြကတော့ ကာကှယျဆေးနဲ့ပတျသကျပွီး သူ့ရဲ့စိတျထားကို မြှဝလောပါတယျ။ ကာကှယျဆေးရရငျ အရငျဆုံးထိုးရဖို့မကွိုးစားခငျြဘူး…. အားလုံးထိုးနိုငျတဲ့အထိ စညျးကမျးလိုကျနာပွီးစောငျ့မယျ… ဆိုပွီး ရေးသားမြှဝလောခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ပရိတျသတျကွီးတို့ရေ။
ဖိုးခဈြရဲ့တဈကိုယျကောငျးမဆနျ မှနျမွတျတဲ့စိတျထားလေးကိုတော့ ပရိသတျတှကေ လေးစားခဈြခငျခဲ့ရသလို ကနျြးမာဖွတျလတျတဲ့ လူငယျလူရှယျတိုငျးမှာ ဆေးအလှယျတကူရနိုငျမယျ့ အနအေထားရှိခဲ့ရငျတောငျ ဖိုးခဈြလိုစိတျမြိုးပဲထားသငျ့ကွောငျး တိုကျတှနျးတဲ့ လူတှလေဲ အမြားအပွားရှိနခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပရိတျသတျကွီးတို့လဲ ဖိုးခဈြရဲ့ လေးစားစရာကောငျးတဲ့ စိတျဓာတျလေးကို အတုယူနိုငျဖို့ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျနျော။အဆုံးထိဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နတေ့ဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစနေျော။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရရင် အရင်ဆုံး မထိုးဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ ဖိုးချစ်
ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ..တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ လည်ပတ်မှုယန္တရားတွေ ရပ်တန့်သွားစေခဲ့တဲ့အထိ သက်ရောက်မှုအားပြင်းခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို ကာကွယ်ကုသနိုင်ဖို့ ပညာရှင်တွေအားလုံးနည်းမျိုးစုံနဲ့ စမ်းသပ်လာခဲ့တာ အခုဆိုရင် သတင်းကောင်းတချို့ ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဆေးပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ရဲ့ စမ်းသ်ချက်ရလဒ်ကောင်းတွေကြောင့် လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလလယ်လောက်ကစပြီး ကာကွယ်ဆေးစတင်အသုံးပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ဒါ့ပေမယ့် ကမ္ဘာလူဦးရေအကုန်လုံးအတွက် တစ်ပြိုင်နက်တည်းထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးတာမို့ ကာကွယ်ဆေးရရှိလာခဲ့ရင်လည်း ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ လိုအပ်တဲ့အဆင့်လိုက် လုပ်ဆောင်သွားရမှာပါ။
လူ့အသက်ကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ရောဂါမို့ လူတိုင်းကာကွယ်ဆေးပထမဆုံးရချင်ကြမှာ အမှန်ဆိုပေမယ့်လည်း ဖိုးချစ်ကတော့ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့စိတ်ထားကို မျှဝေလာပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးရရင် အရင်ဆုံးထိုးရဖို့မကြိုးစားချင်ဘူး…. အားလုံးထိုးနိုင်တဲ့အထိ စည်းကမ်းလိုက်နာပြီးစောင့်မယ်… ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ။
ဖိုးချစ်ရဲ့တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန် မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေက လေးစားချစ်ခင်ခဲ့ရသလို ကျန်းမာဖြတ်လတ်တဲ့ လူငယ်လူရွယ်တိုင်းမှာ ဆေးအလွယ်တကူရနိုင်မယ့် အနေအထားရှိခဲ့ရင်တောင် ဖိုးချစ်လိုစိတ်မျိုးပဲထားသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းတဲ့ လူတွေလဲ အများအပြားရှိနေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးတို့လဲ ဖိုးချစ်ရဲ့ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးကို အတုယူနိုင်ဖို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်။